Mudge's Bluff- Edge of Town Waterfront Lubec Maine - I-Airbnb
Lubec, Maine, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Nicole
Leli khaya elibanzi, elivuselelwe likhona ethekwini, elinokufinyelela ogwini. Jabulela ukushona kwelanga okuhle nokubuka kwe-panoramic kusuka emakamelweni amaningi ekotishi. Kunendawo eningi yokusabalalisa, enekamelo elilodwa lokulala phezulu nelinye elisezingeni eliphansi, kanye nezindlu zangasese nendawo yokuhlala esitezi ngasinye. Izivakashi zilazisa kakhulu ikhishi elikhulu, eligcwele kahle futhi elihlelekile ngokubuka kwalo okuguquguqukayo kwetheku. I-Mudge's Bluff itholakala kalula nje ngamamayela angu-.5 ngaphandle kwe-Lubec Village (9 County Road).
I-sunporch evulekile inikeza indawo eyengeziwe yokusabalalisa. Igumbi lokulala elisezingeni eliphansi linebhavu lalo eliyisigamu nendawo yokuwasha exhumeke kalula. Igumbi lokulala elisezingeni eliphansi linomnyango wengilazi oshelelayo ovuleleka kuvulandi omncane obheke itheku futhi ikuvumela ukuthi ujabulele umoya ohelezayo wasolwandle. Imibhede emibili nayo isezingeni eliphansi. Uzothola ukuthi amafasitela amakhulu egumbini lokuphumula nasekhishini abonisa ngempela imibono eshintshashintshayo yamagagasi, imisinga, amaflethi kasawoti, izinyoni, idokodo lamazwe ngamazwe lase-Eastport, nokunye.
I-Mudge's Bluff iwuhambo olufushane (noma uhambo lwamamayela angu-.5) ukuya ngasemanzini esigodi sase-Lubec, amakhonsathi, izindawo zokudlela, umtapo wolwazi, i-brew pub, imnyuziyamu kanye nolwandle lomphakathi. Kulula ukufinyelela emizileni eminingi yendawo kanye ne-West Quoddy Head Lighthouse. I-Campobello Island, lapho uzothola khona i-Roosevelt Park, ingaphesheya kwebhuloho ukusuka edolobhaneni!
Ngitholakala 24/7 njengomphathi wendawo futhi ngilapha ukuze ngikusize ujabulele indawo!
Hlola ezinye izinketho ezise- Lubec namaphethelo